ဝယ်သူကို ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့ - Better Version
August 17, 2020 2020-08-17 10:10
ဝယ်သူတွေက ကိုယ့်ဆီက မဝယ်ဘဲ လှည့်ပြန်သွားတာ ဘာကြောင့်လဲ?
ကိုယ့်ဆီကို ဝယ်သူရောက်လာပြီဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တာ (၃)ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီက ဝယ်သွားတာ၊ ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်ဆီက ဝယ်သွားတာ၊ ဝယ်ကို မဝယ်တော့တာပါ။
ဟုတ်ပြီ။ ကိုယ့်ဆီက ဝယ်သွားရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး ကိုယ် Sales Closed လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်ဆီက ဝယ်သွားတာမျိုး၊ ဝယ်ကို မဝယ်တော့တာမျိုးဆို ဘာကြောင့်လဲ ဆန်းစစ်ဖို့လိုနေပြီ။
ဝယ်သူတွေကို ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် product က ဝယ်သူရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ လိုအင်တွေနဲ့ မကိုက်လို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Timing မမှန်လို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Customer Service ကို မကြိုက်တာ ဖြစ်ဖြစ် စတဲ့ ထင်သာ မြင်သာတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီထဲမှာ တော်တော်များများ သတိမထားမိတဲ့ အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ ဒါက ဘာလဲဆိုရင် ဝယ်သူကို ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင် ၊ confuse ဖြစ်အောင် လုပ်မိတာ ပါပဲ။
တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ဝယ်သူကို တစ်ခါတည်းနဲ့ information အများကြီး ပေးချင်တာ။ ဝယ်သူ ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်ဖို့ထက် information အပြုံလိုက်ကို တစ်ခါတည်း ပေးဖို့ကိုပဲ လောနေတတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီ အခါ ဝယ်သူက အီသွားပြီး၊ confuse ဖြစ်သွားပြီး သူဘာလိုချင်မှန်းတောင် မသိတော့ပဲ ဝယ်ဖို့ စိတ်မပါတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး ဝယ်သူရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လိုအင်ကို အရင် သိအောင်လုပ် ပြီးရင် သူတို့ ဘာလို့ ကိုယ့်ဆီက ဝယ်သင့်တာလဲ? ကိုယ့်product ရဲ့ feature နဲ့ benefit တွေကို တိုတိုနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလိုပြောဖို့ဆိုတာကလည်း ကိုယ့် product ရဲ့ feature တွေ Benefit တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရှင်းနေရမယ်။ Email ပို့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောရင် ဖြစ်ဖြစ် ကြော်ငြာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် information ပေးတဲ့အခါ အဓိက အချက်အလက်တွေ၊ ရောင်းကုန် အကြောင်းတွကိုပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေးဖို့လိုပါတယ်။
မရှင်းရင် ကိုယ့်ကို ပြန်မေးမှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးက မမှန်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က ဝယ်သူရဲ့ Buying process ကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်အောင် လုပ်ပေးရမှာပါ။ အဲ့ဒီတော့ နဂိုတည်းက ဝယ်သူကို clear information မပေးတဲ့အပြင် ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ရင် သူက ကိုယ့်ဆီက ဝယ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော် အလှမ်းဝေးတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရောင်းသမားတွေ သိထားရမှာက ရှုပ်သွားအောင် လုပ်ရင် ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာပါဘဲ။
ဒီတော့ ဝယ်သူကို ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင် မလုပ်ပဲ ရှင်းလင်းတဲ့ information ကို အမြဲပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။